Kedu otu esi eme ka backlinks na-etinye site na ihe onwunwe bara uru?
Nke ahụ bụ mkparịta ụka isiokwu kwesịrị ekwesị, karịsịa n'ihi na ịchọta ọganihu na-adịte aka na profaịlụ backlinks agaghị enwe ike nweta naanị site na ịmepụta ihe onwunwe, ọbụna nke kachasị elu. N'ezie, ọ dị ezigbo mkpa ịma otú e si eme ka ihe ndị e kere eke na backlinks kwadoro na ezigbo ihe onwunwe. Kedu ihe na-eme ezigbo ego? E mere n'ozuzu, ezigbo nnwere onwe dị mma na-anọchite anya ọdịnaya nke gbanwere nke ọma nke ga-enyere gị aka ịmepụtakwu òkè, ndị ọzọ, ndebanye aha, mmasị, na ihe ndị ọzọ, na-ekwu na ịnakwere usoro ịchụ onwe onye nke usoro njikọ njikọta. Ma, ihe ọ bụ bụ na ihe ọ bụla nwere ike ịkwado - ọ bụ ndị ahịa ahịa dijitalụ na-eleghara echiche a dị mfe anya.Ee, ha maara otú e si eme ka onye ọrụ aka maka backlinks m ga-ekweta, dịka ọmụmaatụ na ụzọ dị elu nke ntanetị anya na nlezianya nke ọma. Ma ka anyị chee ihu - a na-elegharakarị ọrụ nkwado weebụ na ọrụ ahịa anya, ọbụna site n'aka ndị ahịa weebụ ma ọ bụ ndị nwe ahịa n'Ịntanet.Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe a, m ga-achọpụta ihe niile gbasara ụzọ dị irè maka ịmara otú ị ga-esi mee ka azụmazụ ndị ọzọ na ahịa ahịa.
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ebe a bụ ihe anyị ga - eji egwu - ahịa ahịa ejighi ihe ọ bụla jikọrọ ya na inye onyinye iji jikọta nnweta, ma ọ dịkarịa ala kpọmkwem. Ekwuru m na enweghi ike iji usoro nke ọdịnaya gị nke a na - ejiri mee ihe dịka "njikọ magnet. "Ma ihe a nwere ike ime ebe a bụ ime ka otu akụkụ nke mgbalị gị niile gbakwunyere - kpọmkwem ịkwado njikọ nnweta na-aga n'ihu maka weebụsaịtị ma ọ bụ blog gị na mpaghara azụmahịa. Ya mere, n'okpuru ebe a, ndepụta dị mkpirikpi nke ihe mgbochi iji nyere gị aka.
Nhọrọ nke ohere - bụ ihe mbụ a ga-atụle maka njikọ njikọ gị na nnweta mgbasa ozi. Ihe niile ịchọrọ maka ezigbo mmalite kickass bụ aha a na-enyocha aha n'ime ikike ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa - ebe nke na-emepụta ohere maka mma njikọ ụlọ.
Enwekwu ohere - ihe ọzọ dị mkpa a ga-atụle maka ihe onwunwe gị.N'ezie, enwere ike inwe ọtụtụ ụzọ dị iche iche, na-adabere n'ụdị ahịa ahịa siri ike, ụdịrị ahịa dịgasị iche iche, ụzọ mgbalị siri ike iji mezuo ebumnuche ahụ, yana ịchọta ohere iji kwekọọ na atụmatụ mmefu ego gị - na okwu nke nkwado nke onwe ya, yana usoro okike na smart atụmatụ nke nkesa ọdịnaya.
Nyocha nyocha iji mee ka ọtụtụ n'ime nchịkwa azụmazụ njikọ dị elu nke ndị ahịa gị na-eji eme ihe ugbu a, na-enwe ohere iji zere oké ọnyà ndị ị na-achọ ịchọta ndị iro gị.
Ntinye aka nke ndi obodo iji nweta mgbasa ozi karia nke netiwu maka ndi mmadu, okwu, njikọ, na ndi ndu.
Na-achọ maka ịmekọrịta njikọ njikọta na iji amamihe nke ihe oyiyi.
Mmekorita azụmahịa na-agbanwe agbanwe, ime ka mmekorita nke mmekorita na mmekorita na ndi mmadu na-acho onodu ndi ozo maka ime ka ndi mmadu nwekwuo ihe ha na ha Source .